စံပယ်ဖြူတွေ တောင် ပွင့်ပြီ ကွယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Photography » စံပယ်ဖြူတွေ တောင် ပွင့်ပြီ ကွယ်	30
စံပယ်ဖြူတွေ တောင် ပွင့်ပြီ ကွယ်
Posted by ムラカミ on May 9, 2015 in Photography | 30 comments
စံပယ် ဖြူတွေ ပွင့်ပြီ ဆိုမှတော့ စံပယ်ဖြူတွေ ပွင့်တာ ပေါ့ဗျာ…
မနက်စောစော အိမ်ရှေ့ထွက် လက်ကမျင်းထားတာပါ
Alinsett @ Maung Thura says: ပန်းထဲမှာ အခုတလော ကြည့်မရ ဖြစ်နေတဲ့ပန်းးး
ဒါနဲ့ စံပယ်ဖြူတွေက ရိုးရိုးပွင့်တာ မဟုတ်ဘူးလားး (ခေါင်းစဉ် စာသားအရ)
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: နင်က … ဟိုပန်းမှ ကြိုက်တာမလား ..
ရွှေပန်း လေ … မီးပွိုင့်မှာ ရောင်းတာ…
Ma Ma says: ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ် ဖတ်လိုက်တာ …
ဆံပင်ဖြူတွေတောင် ပွင့်နေပြီ … လို့။ စံပယ်ပန်းလေးတွေ လှလိုက်တာ။
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: အိမ်ရှေ့ ၀ဲယာ မှာ စံပယ်ရုံတွေ အားကြီး…
နွေဆို ခူးမနိုင်တော့ …. တရုံတရုံ လင်ပန်း နဲ့ တချပ်စာ အသာလေးရရဲ့
ဂလိုပဲ မြေကောင်းပီး ညတိုင်ဆို မိုးရွာလေတော့ အထွေအထူး ဂ၇ုစိုက်စရာမလိုဘဲ ပွင့်လေရဲ့…
မနက်ဆို ရိုက်-ခူး-ပန်-သီ-တင်… နဲ့ တမိသားစုလုံး အလုပ်ကိုရလို့
အောင် မိုးသူ says: ပေးစာတွေတိုင်း တစ်ပွင့်စံပယ်ထည့်ကာရယ်။ မေလေအသက်နဲ့ရယ် အမှတ်နဲ့ဒါပင် တကယ်… အစဉ်ရယ် ဝတ်တရားတစ်ရပ်ထက် ပိုဆဲကွယ်……….. နေ့တွေရက်တွေဟောင်းလာတော့ တစ်ပွင့်စံပယ်လေး သက်သေကွယ်…။
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ၀တ္တရားထက် လွန်ပီး ပိုဆဲတယ် ဆိုတော့
Mike says: .လှချက်ကွာ
.ရွှေပြည်သာတစ်နေရာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: လှယင် ဘီဘီနဲ့မြည်းရအောင်ဗျာ
ခင်ဇော် says: ချောမွတ်နေတာပဲ..
ရန်ကုန်က စံပယ် တွေထက် ပိုလှတယ် ..
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ရန်ကုန်လား … အင်းးး.
ရန်ကုန်မှာ တပွင့်ကို နှစ်ပွင့်ခွာတယ်
ဆေးအစိမ်းတွေ ဆိုးတယ် ကြိုး အတိုအရှည် နဲ့ တပွင့်နဲ့ တပွင့်ကြား ကို ကစားတယ်…
ကျုပ်တော့ တောမှာပဲ ..ပျော်နေပါတယ်ဗျာ…
Wow says: ကင်မလာအဖက်တွေပါအေ..
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: အောက်အိမ်ကို ရှိုး လိုက်ပါ ဂျီးတော်…။
kai says: ရွှေနဲ့မြ.. ၀ါနဲ့စိမ်းက… မိတ်ဖက်လို့ထင်တာ…
အခုမှ… ဖြူလွလွနဲ့.. မြစိမ်းနု…
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: သဂျီး တယောက် အသက်ထောက်သဖြင့် color wheel ကိုမေ့သွားလေပြီ…ထင့်
တကယ်တော့ အဖြူက အလယ်ခေါင်မှာလေဗျာ…
တခုတော့ ရှိတယ် .. white balance က ပြာတဲ့ဘက်သွားနေတာက
မနက်စောသေးတာရယ် မနေ့ညက မိုးရိပ်ကြောင့်ရယ်…
ပန်းကတော့ သည်မနက်မှ စပွင့်တာကြောင့်ရယ်ပါ
အစိမ်းနဲ့ ကွန်ပလီမန်ထွီ ဖြစ်တာက အနီ ခည..
နှစ်ခုလုံးက ပြင်းပြင်းပြပြရှိသမို့ … ထရိုင်းယက် တို့ ရက်တန်ဂယ်တို့ လက်ကိုင်ထားတဲ့ဆြာတွေက
၀ါလိမ္မော် နဲ့ လိမ္မော်သွေးဘက်ကို ရောသုံးကြတယ်… (ခရမ်းပြာ ကို ထောက်ကူပြီးတော့ပေါ့..)
ကျော်ကတော့ ရှည်ရှည်ဝေးဝေး မတွေးပါဝူးဗျာ…
မည်းချင်ရင် အုံထဲ ထိုးရိုက်
ညိုမောင်းချင်ရင် မြေနီလမ်း (သို့) သစ်ရွက်ခြောက် နောက်ခံရိုက်…
ဗဟို အပါအ၀င် အရပ်ရှစ်မျက်နှာ ဆိုတော့ ကိုးကွက်
အနီး + အဝေး ဆိုတော့ ကိုးနှစ်လီ ဆယ့်ရှစ်
အပါချာ အကျဉ်းအကျယ် ထည့်ပေါင်းရင် ဆယ့်ရှစ် နှစ်လီ သုံးဆယ့်ခြောက်
နောက်ဆယ်ပုံကျော် လောက် တက္ကနီကွေးလွတ် စည်းမျဉ်းလွတ် ရိုက်လိုက်အုံး….
အဲ့သည်မှာ ငါးဆယ် နှစ်လီ တရာ…
အနှီတရာထဲက ကောင်းနိုးရာရာ ပုံ ၂၀လောက်ကို အဖြူအမဲပြောင်း
နောက် ၂၀လောက် ကို ကာလာရိုက်ဇ် လုပ်
အကြိုက်ဆုံး ၁၀ပုံလောက်ကို ဘူ့မှ မပြဘဲ သိမ်းထား…
အဲ့လာ တနာရီအတွင်း ပုံတရာထွက်နည်းပဲ…
မိုဒယ်တယောက်… တနာရီလောက်ဆို.. ပုံဘယ်နှထောင်ထွက်မလည်းမသိ…။
ကြုံရင်တော့… ပုဂံသွား.. အာနန္တွာနဲ့လုပ်စားခဲ့ပါဦး..။ အားရင်လည်း.. ကာလာသီအိုရီစာလေးရေးပါဦး..။
မြစပဲရိုး says: အဲလို ပွင့်ဖတ်တွေ အများကြီးလိုမျိုး ကို စံပယ်အိုးပုတ် လို့ ခေါ်လားမသိ။ အထင်။
နံပါတ်(၄) က ရေစက်လေးတွေ နဲ့ ရဲ့ နောက်က ဝါးနေတဲ့ အပွင့်လေးရယ် နဲ့ အတော်ကြည့်လို့ ကောင်းတယ်။
ပုံနံပါတ်(၇) က ပန်းလေးက ချောင်းကြည့်နေသလိုဘဲ။
အခါ ၁၀၀ လောက် ခလုပ်နှိပ်နိုင်ရင်တော့ တစ်ပုံ နှစ်ပုံ အလှလေး တွေ ထွက်လာတတ်ပါတယ်။
:—–: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: စံပယ် အိုးပုတ် က ပွင့်ချပ်တွေ ပိုထူတယ် …
စံပယ် ကြက်ရုန်း လည်းမဟုတ်ဘူးဗျ သူက ချွန်ချွန်နဲ့…
စံပယ်ပန်းက စံပယ်ပန်းပေါ့… ဂျာ …
အမျိုးအစား တွေ လျောက်ခွဲမှ တော်ကြာ စံပယ်တွေ ပြည်နယ်တောင်းနေအုံးမယ်…
padonmar says: မွှေးလာသလိုပဲ။
uncle gyi says: စံပယ်ပွင့်ပြီဆိုနွေရောက်ပြီပေါ့
naywoon ni says: ​နွေ​ရောက်​​ပေမဲ့ ​ရေရမှ ပွင့်​နိုင်​တာမျိုး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1880
စိန်ပလိန်တိန် မုန့်ကြိုးလိမ် says: အခု ဘ၀မှာတော့ အနုအလှနဲ့
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: အိသဒ္ဒါမိုး မဟုတ်တော့ဝူးလား ဟင်င်င်င်င်
Ma Ei says: စံပယ်ပန်းကလေးတွေ အရမ်းကိုလှ
ပူလွန်းတဲ့ နွေလဲ အေးချမ်းစေချင်လှပြီ…
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ကျနော်တော့ တောထဲမှာ စားကောင်း အိပ်ကောင်းနဲ့ တခါတခါ အဲ့ဒါတွေကို စားစရာလို့မြင်နေတယ်…
စော်နဲ့ ကြည်အောင် အဲ့ပန်းတွေ ဆီနဲ့ ကြော်စားလိုက်ရရင် ကောင်းမား ဟင်င်င်င်
Mr. MarGa says: ရွာထဲက ပန်းစံပယ်​ ဆိုတဲ့ အ​ကောင့်​ကို သွားသတိရမိတယ်​
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: အကြွေးပေးစရာရှိလို့လား…
ကျော် ကိုယ်စား ယူထားပေးလို့ရမားဟင်င်င်
aye.kk says: ကိုယ့်အသက်ရွယ်နဲ့ဆိုတော့ကါ
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: အဲ.. ၂ယောက်ရှိပြီ
ဆံပင်ဖြူတွေ ဆိုလို့ ပါ ကျနော်တော့ ..သည်နွေ ဆံပင်အရှည်ထားမိတာ
ပူကပူ ဗောက်က ထ ဆံပင်ကကျွတ်
ကိုယ့်ဆံပင်ဖြူ ကိုယ်ပြန် မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်နေရပြန်သမို့ အောင့်သက်သက်ရယ်ဗျာ
မကြီးသေးပေမယ့် မငယ်တော့တဲ့ အသက်မှာ ကိုယ့်ဆံပင်ဖြူကိုယ်
အရှင်လတ်လတ် (မနှုတ်ဘဲ မှန်မထောင်ဘဲ) မြင်ဖူးလိုက်တဲ့ ဖီလင်က တမျိုးတော့ တမျိုးပဲဗျ…
အရီး လေး says: အရမ်းလှလို့ တချို့ပုံ​တွေ သိမ်းထားတယ်​
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: သိမ်းတော်မူပါ အရီး စပ်ဖြီးဖြီး